SHARAXAAD KA MID AH SHIMBIRAHA DUURJOOGTA AH EE MULARD IYO FURSADAHA AY KU QABAAN GURIGA - CALEEMAHA DHASHA
Bannaanka u badan iyo kuwa haysta dabaqado gaar ah, xayawaanka xoolaha guriga.
Iyada oo ay joogaan saldhig fatuxeed ku filan si ay ugu lug yeeshaan xayawaanku ma aha mid aad u adag, gaar ahaan maaddaama faa'idooyinka xirfadahan oo kale ay yihiin kuwo la taaban karo.
Adigu maaha kaliya inaad bixiso hilib, laakiin waad ogtahay waxkasta oo ku saabsan asalkiisa.
Dabcan, habka ugu fudud ee lagula tacaali karo shimbiraha, sababtoo ah adoo raqiis ahaan u quudiya, uma baahnin inay caano gaar ah u gasho guryaha, waxaadna kori kartaa guga ilaa xilliga dayrta, sanadka soo socda waxaad ka iibsan kartaa chicks cusub.
Maanta waxaan rabnaa in aan ka hadlo nooca ducks ee la yiraahdo Mulard, ka saarida taas oo keeni karta dakhli iyo faa'iidooyin badan.
Mulkooyinka Mulard: Waxaan u koraynaa hilibka, laakiin ma ahan dhalmo
Tani waxay ka mid ah shimbiraha aan muddo dheer ka hor muuqday suuqa shimbir. Shimbirahaasi waxaa soo jiidanaya xaqiiqda ah in ay leeyihiin madow madaxooda.
Sidoo kale, dad badani waxay ugu yeeraan "mulatto" calaamad this, maaddaama inta kale ee jirkoodu yahay mid cad. Mulardy waa Beelaha, sababtoo ah iyaga looma helin hab dabiici ah, laakiin iyada oo laga gudbo noocyo kala duwan oo shimbir ah.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadleynaa in laga gudbo duck nutmeg, taas oo laga yaabo inaad maqashay wax badan, sababtoo ah waxay aad ugu badan yihiin duck Beijing caadiga ah.
Si aad xiiso dheeraad ah u hesho Mulard beeraha, ha ilaawin inaad ku sheegto "broiler" ducks of this caan.
In beerista, ay yihiin gabi ahaanba waa mid guud ahaan: waxaa loo heli karaa in guriga loogu talagalay baahida qoyska hal, iyo sidoo kale loo isticmaalo quudinta industrial warshadaha digaaga iyo iibinta dheeraad ah ee hilibkiisa.
Cunto-keli ah - "broilers" ayaa lagu qiimeeyaa xoogaa ka qaalisan roodhida caadiga ah ee hilibka, inkastoo natiijadu ay ka sareyso.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in goobta dhalashada ee Faransiiska, halkaas oo kalluumeysatada xirfadlayaasha ah ay si dhab ah u tijaabiyeen ugu wanaagsan, iyaga oo soo jiidanaya nuuca cusub oo leh sifooyin qaas ah oo wanaagsan, oo laga tirtirayo ku dhowaad dhammaan cilladaha naas-nuujiga asalka ah.
Sidaa daraadeed, aqoonta la xiriirta Mulder Mulard wuxuu ka bilaabi doonaa astaamaha qaababka taranta.
Qaababka dabiiciga ah ee loo adeegsado taranka Mulardov
First of dhan waxa muhiim ah in la ogaado in noocyada taranta ee ducks ku tilmaamay ayaa leh farqi badan.
Gaar ahaan, haddii ducks miskaha lagu dabeeciyo dabeecad xasilan iyo hagaajin, kuwaas oo qiimo badan oo qiimeeya, ka dib ducks Peking waa wax ka soo horjeeda - waxay yihiin kuwo aan caadi ahayn, baalkoodu si joogto ah u wasakhaysan oo aan ku haboonayn. Inkasta oo aysan aheyn sifooyinka ugu muhiimsan ee laga helayo caleemaha, hadana inta badan waxay ku ciyaaraan door muhiim ah.
Waxaan soo jeedinaynaa in aad la tashato sifooyinka kale ee noocyada kala duwan ee jadwalka hoose.
Tayada hilibka iyo sifooyinka
Muskard Duck: Tayo waa mid aad u sareysa, wuxuu leeyahay sifooyin aad u fiican, wuxuu leeyahay tiro badan oo nafaqooyin ah oo faa'iido u leh dadka.
Duck Peking: Guud ahaan, hilibka ayaa leh tayo wanaagsan, laakiin noocyada kala duwan laguma talinayo beerista hilibka. Iyada oo quudinta ballaaran, foomamka la mid ah ma aha tiro muruq ah, laakiin tiro badan oo dufan ah, ka dib markii taas oo ay lumiyaan muhiimadda warshadaha.
Noocyada ayaa kordha
Duck Muscovy: Bilowgii, taranka ayaa leh miisaan hooseeya, waxa kale oo uu ku kasbaday heerar aan qiimo lahayn.
Duck Peking: Miisaan aad u dhakhso badan, waa tartanka ku saabsan arrintan.
Bilow qadinta ukumaha
Duck Muscovy: Da'da 8-9 bilood. Ukunku wuxuu soconayaa qiyaastii 3-4 bilood, ka dib marka shimbirku bilaabmo in uu gooyo. Waqtiga bilawga ah ee cayiman, wareegga ayaa dib loo soo celiyaa.
Duck Peking: Da'da 29-30 toddobaad, taas oo ah 7-7.5 bilood. Horumarinta galmada, ilamahani waa ka hor inta badan dad kale. Wax soo saarka hal sano ee nolosha naaska waa qiyaastii 7 bilood.
Duck Muskard: Dumarka oo miisaankoodu yahay 2.5 kilo, ragga waxay gaari karaan 5.
Duck Peking: Duck 3 kiilo, drake - 3.5. Miisaanka 8 bil kasta wuxuu u dhexeeyaa 1.8 ilaa 2.2 kiilo garaam.
Iyada oo ay sabab u tahay xulashada labadii dabeecadood ee la qeexay, waxay suurtogal ahayd in si wadajir ah wax looga qabto dhammaan cilladaha oo ay ka caawisay faa'iidooyinka ugu muhiimsan. Sidaa daraadeed, si gaaban sharaxaadda duufka Mulard, waxaa la ogaan karaa in ay yihiin deganaansho, haysato tayada hilibka oo fiican, culeyskoodu si fiican u kordho oo ay si fiican u shaqeynayaan.
Maxay yihiin faa'iidooyinka ilamaha ama aqoon tifaftiri leh oo leh mashiinka Mulard
First of dhan, waa in aad fiiro gaar ah nidaamka difaaca aad u fiican ee ducks of this caan. Xataa iyada oo aan lahayn xaaladaha ugu wanaagsan aad bay u jiran yihiin. Intaa waxaa dheer, Mularda waxaa lagu kala saaraa baadiyaha aadka u xoogan, Musqulaha ayaa loo horumariyay wax ka xun (maaha wax aan la ogeyn in caanuhu u arkaan inuu yahay miisaan).
"Broilers" ayaa faa'iido badan ka helaya maxaabiistaan, taas oo shuruudaha xabsiga ay tahay mid aan khusayn, maxaa yeelay waxay awood u yeelan doonaan in ay la qabsadaan qof kasta.
Faa'iidada ugu weyn iyo sharafta Mowjadaha Moulard waa awoodda si fudud loo dhimi karo dhibcaha heerkulka iyo dhibcaha. Si kastaba ha ahaatee, shimbirahan ayaa si joogto ah u kordhi doona miisaanka, iyada oo aan loo eegin caadooyinka quudinta, gaar ahaan maadaama ayan mar dambe u dhex marin.
Faa'iidada ee taranka ma aha oo kaliya tayada wanaagsan ee hilibka soo go'ay, laakiin sidoo kale beerka duck. Waxaa la aaminsan yahay in beerka ee taranka la soo sharaxay ay ugu fiican tahay wax soo saarka cawska foie. Kordhinta tani, ma aha oo kaliya jilicsanaanta iyo cabbirka weyn, laakiin sidoo kale qiimaha nafaqada.
Kuwa kale mudnaanta Doodaha Mulard waa in loogu yeedhaa:
Nadiifinta in uu taranka laga dhaxlo ducks moos. Sidaa daraadeed, xiitaa qaangaadhka, shimbirahan waxaa loo isticmaali karaa iibka, hoos iyo baalasha waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin warshadeed.
Dabeecada xasaasiga ah ee ducks, taas oo mar kale laga dhaxlay ducks moos. Tani waa mid muhiim u ah taranka shimbiraha ee shimbiraha, sababtoo ah marar dhif ah ayay maqlaysaa xayiraadda, mana ku deg degi doonaan deyrka (gaar ahaan haddii ay ka rogaan jir biyo ah).
Bisaylka hore, taas oo ah, bilawga ah ee ukunta-dhalmada ee dheddigga. In this dhalashada, waxay bilaabataa at 180-210 maalintii. Dumarku waxay dhigtaa tiro badan oo ukun ah, laakiin ma ahan kuwo bacrimiya.
Hilibka tayo sare leh. Waxaan horay u soo sheegnay in mooska jilicsan ee ducks ay u isticmaalaan taranta Moulards waxaa lagu gartaa tayad aad u wanaagsan oo hilib, taas oo ah miraha dhaxalka laga dhaxlay dhaxlaan.
Si kastaba ha ahaatee, waa wax soo saarka hilibka dheddigga ah ee kor loo qaado, laakiin ragga waa la soo saaraa wax soo saarka beerka iyo foie-grasie. Ka dib dhan, miisaanka beerka ee hal drake wuxuu noqon karaa 500-550 garaam.
Kordhinta taranta iyo beerashada. Nuxurka qodobkan waa waxa aan horey u soo sheegnay wax yar oo ka sarreeya, kuwaas oo aan ka aheyn daraasadihii lagu sharraxay cuntooyinka, la qabsashadooda xaaladaha heerkulka iyo habka difaaca jirka.
Waa in aynaan ilaawin wax soo saarka sare ee dusha Mulard, sababtoo ah maaha inay bixiyaan qadar badan oo hilib ah, laakiin sidoo kale mulkiilahoodu waxay leeyihiin ukun iyo beer caafimaad leh.
Dhibaatooyinka ay la kulmi doonaan marka la barbardhigo dufanka iyo duufaanka sii kordhaya Mulard
Ducks waxay heystaan ​​degenaansho, waxayna bixiyaan hilib badan, waxayna haystaan ​​beerka ugu fiican, waxayna ku siin doonaan ukun, laakiin waxaa sidoo kale jira cilladahan.
Xaqiiqdu waxay tahay in shimbiraha miro-dhalka ah ee moladr awoodi waayeen in ay caruurtooda dhalaan. Xitaa ukumaha ay soo saaraan waa kuwo aan ku habboonayn ducklings, maxaa yeelay waa kuwa aan xaq u lahayn.
Sidaa daraadeed, badanaa waa lagama maarmaan in si joogto ah looga iibsado ducklings cusub si kor loogu qaado hilibka digaaga. Laakiin weli had iyo jeer lagama maarmaan ma aha in la sameeyo tan, iyo badanaa, sababtoo ah waxay weli suurtagal tahay in lagu gaaro ilmo cusub oo ka mid ah Mulardov.
Waa in sidoo kale la ogaadaa in noocyada ducks sida Mulard uusan ku jirin dabeecadda, tan iyo markii ay dalagyada taranka ku nool yihiin meelo aad u kala duwan, oo ay kaliya laga dhaafi karaa dabeecad.
Gaar ahaan, taniyo xoolaha ayaa caleenta buuggan ka soo baxay mooska iyo diga Peking, haddii aad ku haysato naaskii ugu horreeyay ee guriga iyo haweenkii labaad (si fiican, ama lid ku ah, inkasta oo ay jiraan waxoogaa naaso ah halkan), ka dibna waa mid macquul ah in laga helo iyaga oo ah farcanka caanaha aad u baahan tahay.
Dabcan, iskudhufka guriga sida mar walba ma awoodo inuu bixiyo 100% natiijooyinka, sababtoo ah, ka dibna dhan, waa inaad la tacaaltaa genetics aan la saadaalin Karin, laakiin xaaladaha badankooda xitaa habkani wuxuu bixiyaa natiijooyin aad u wanaagsan oo sax ah.
Laakiin xitaa halkan waxaa jira waxoogaa riwaayad ah: maadada jilicsan ee muuska waa mid aad u adag in lagu qasbo haweeney ka dhalatay ilmo kale oo aan ahayn kan kale. Si arrintan loo dhameeyo, waxaad u baahan tahay inaad noqoto mid xariifnimo leh, adoo ku ridaya shimbir dhan Peking Peking oo ka soo jeeda dadka kale iyo laf ahaantaada. Laakiin xitaa xaaladdan, boqolkiiba bacriminta waxay noqon doontaa ilaa 70%.
Marka aad joogtid guriga, waa wax aad ufiican oo heysta duck duban, iyo miyir-beelka. Diidmada kiiskan waxay noqon doontaa mid waxtar leh, laakiin farcankiisa ayaa dhaxli kara kartida miisaanka ka soo reyneysa hooyada mana ku farxi doono hilib badan.
Sidaa daraadeed, Moulards ee guriga laga helay ma aha mid ku kala duwan dhammaan sifooyinka ay ka mid yihiin. Si kastaba ha noqotee, haddii ay guuleystaan, waxaad iibin kartaa ducklings, kuwaas oo aad u qiimeeya.
Qaababka kale ee taranka iyo sifooyinka gaarka ah
Haddii aad go'aansato inaad bilowdo sii deynaya Mulard, waa inaad sidoo kale barataa sharaxaadda dibadda.
Xaaladaha badankood, noocaan isweydaarsiga ah ayaa lagu rinjiyey caddaan waxayna leedahay madow madow oo madaxa saaran.
Si kastaba ha ahaatee, ereyga muhiimka ah ee weedha hore waa weedh isku mid ah "foomka hybrid", oo inta badan bixiya isku dhafan kala duwan ee midabyada shimbiraha. Sidaa darteed, haddii aad hesho duurarka madow ama brownka ah ee taranka lo'da ee Beijing iyo mooska mooska, ha ahaadaan kuwo degdeg ah si ay u murugoodaan, waxay muujin karaan natiijooyin aad u wanaagsan koritaan dheeraad ah.
Maxay tahay wax soo saarka mulkiilaha Mulard? Qaar ka mid ah xuduudaha ugu muhiimsan.
Dabiici ahaan, beerashada gudaha ee ducks ugu horrayn waxay ku lug leedahay isticmaalka hilibkooda. Marka laga hadlayo Mulardes, tani waa mid dabiici ah, sababtoo ah caanuhu waa isku mid sida hilibka, sababtoo ah waxay awood u leedahay in ay soo ururiso qaab nololeed wanaagsan.
Sidaa daraadeed, qaan-gaarnimada, miisaanku wuxuu u dhexeeyaa min 6 illaa 7 kiilo garaam, iyo dheddig 5.5 ilaa 6.5 kiiloogaraam. Faa'iidada aadka u weyni waxay sidoo kale tahay xaqiiqda ah in da 'yarta 7-10 usbuuc ay aad u dhaqso badan yihiin miisaanka xitaa iyadoo aan la siin quudin aad u badan, miisaankoodu yahay da'da noocan ah sida badanaa waxay u dhaxaysaa 1.3 illaa 1.5 kiilo garaam.
Waxyaabaha ukumaha ah ee ukumahaas ayaa sidoo kale aad u sarreeya. Mid ka mid ah nuucaan hal xilli-ciyaareed ah ayaa soo saari kara qiyaastii 250-270 ukumaha aan caqliga lahayn, kuwaas oo si fiican ugu habboon cunto karinta. Dumarku waxay bilaabaan inay midho hore u soo baxaan 180-210 maalin noloshooda.
Waxaan ku hawlanahay taranka Miladr ee taranta: sida loo siiyo shimbiraha leh kuwa ugu muhiimsan?
Inkasta oo tani ay tahay mid ka mid ah shimbiraha aan loo tixgelin karin, haddana waxaa muhiim ah in ay bixiso xaalado wanaagsan oo lagu helo miisaan. Marka kaliya ducks yar yar yihiin, waxaa muhiim ah in hay ama cawsku u adeegaan sidii qashin iyaga loogu talagalay, laakiin kiis lama arki karo.
Sababta arrintani waxay ku dheehan tahay xaqiiqda ah in balka dhirta uu aad u kulul yahay qoyaan iyo qoyaan muddo dheer marka la barbardhigo hilibka. Oo tan iyo markii qoyaanku yahay ilaha ugu muhiimsan ee noloshooda ducks, berrinka ayaa mar kasta qoyi doona, wuxuuna sababi karaa geerida qayb ka mid ah farcankiisa.
Marka la eego kan dambe, ma suurtagal ah in la diido shimbirahan hoygeeda ah, taas oo ah, caadi ahaan, taas oo ah biyaha jirka.
Sidaa darteed, haddii aad doonayso inaad soo baxdo ducks, horey u sii feker sida loo sameeyo ugu yaraan aaladda. Ka dib oo dhan, xitaa ducklings da'da 30 maalmood waa muhiim. si joogto ah u socodka biyahataas oo sidoo kale ah ilaha cuntada ee dabiiciga ah.
Sidoo kale, xeer kale oo muhiim ah waa in ay ka fiican tahay in ay ka fogaadaan shimbiraha kale, si ay u koraan iyo si fiican u quudiyaan.
Maxaad iyo inta jeer ee aad u baahan tahay si aad u quudiso Mulardov-ka: samee cuntooyinka ugu wanaagsan
Haddii aadan iibsan ducklings yar ee suuqa, laakiin go'aansaday in ay soo iibsadaan ukunta of this caleen, ka dibna waa inaad sidoo kale waa og yahay sida loo iyaga quudiyo min xilliga ay ka dillaacaan ukunta.
First of dhan, waxay u baahan yihiin in la sakhraan, iyadoo loo isticmaalayo ujeedadan xal xalin daciif ah oo ah kaneecada (fara badan oo waxyeellayn kara shimbiraha). Sidoo kale, laga bilaabo maalmaha ugu horeeya waxay u baahan yihiin in la siiyo Boorash la kariyey la isku qasan leh ukunta la kariyey. Isla mar ahaantaana, joogtada ah ee Boorashka waa inay noqdaan kuwo dareere ah, sidaas darteed ducklings waxay ka helaan cuntada qoyaanka.
Sidoo kale waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in ducks of this caan ka bilaabaan in ay ku quudiyaan naftooda oo kaliya laga bilaabo maalinta saddexaad ee nolosha, halka aan si dhakhso ah loo wareejin karin cuntada adag. Kaliya - wakhti yar kadib waxaad bilaabi kartaa ku dar cagaarka la jarjaray mashiinka.
Oo hadda, laga bilaabo toddobaadkii labaad ee noloshooda, cunto ayaa lagu qasi karaa baradho la kariyey.
Iyada oo quudinta dheeraadka ah ee shimbiraha, waa in aynaan ilaawin walxaha macdanta ee wax ku biirin kara koritaanka wanaagsan, laakiin sidoo kale caafimaadka shimbiraha. Gaar ahaan, waxay noqon kartaa:
Muuqaal muhiim ah ee quudinta ducklings waa in ay siiyaan biyo, kuwaas oo ay aad u jeclaan lahaa in dabeecada ay duck. Marka la eego arrintani, waxaa habboon in la fiirsado buuxda cabitaanka dadka oo mar walba ku shub biyo nadiif ah.
Dabcan, in ay ugu fiican tahay in loo diro kaydadka, si ay iyagu naftooda u bixiyaan ma aha oo kaliya biyo, laakiin sidoo kale duckweed faa'iido leh iyaga. Haddii aysan jirin wax kayd ah oo ku dhow goobta, ka dibna duckweed weli waa in lagu tuuraa godadka.
Iftiiminta marka daaqsinka taranka: maxaa iyo goor intee le'eg?
Bixinta ducklings leh iftiiminta waa mid aad u muhiim ah, sababtoo ah arrintan waxay hubisaa in ay ku habboon yihiin xaaladaha dibadda. Gaar ahaan, isla markiiba dhalashada ka dib waxay ubaahan tahay iftiinka saacadaha.
Marka duurjoogta yar yar koraan, billow cun cunno dheeraad ah oo si xor ah u dhaqdhaqaaqa, waxaad yareyn kartaa qadarka iftiin yar, oo ay ku jirto ilaa 15-17 saacadood maalintii.
Waa maxay heerkulka shimbiraha u baahan yahay?
Ka dib dhalashada ducklings, waxay sidoo kale u baahan yihiin kuleyl badan, sababtoo ah heerkulka hooseeyo way dhiman doonaan. Haddii lagaa saaro isticmaalka kuleyliyaha, markaad huruddo waxaad u baahan tahay inaad ku hayso heerkulka 28 ilaa 30 ° C, laakiin wakhtiga caadiga ah marka ay si firfircoon u dhaqmaan, aan ka yarayn 23 ° C.
Ka dib oo dhan, leh muuqaalka dabiiciga ah ee ducklings, hooyadood waxay siisaa diirimaad, iyo xaaladaha sida farsamada sida, waa in aad u wareejisaa howlahan mas'uuliyadi saaran garbahaaga.
Maxay tahay da'da shimbirta ugu fiican ee hilibka?
Waxaa la aaminsan yahay in Mulardov uu ugu wanaagsan yahay hilibka 2 ilaa 3 bilood jir. Haddii aad siiso raashin wanaagsan, waqtigaan waxa ay gaari doonaan tusaalayaal aad u wanaagsan oo miisaan leh, hilibka ayaa noqon doona mid aad u jilicsan.
Waa mid aad u muhiim ah in mudada u dhaxeysa taariikhda la tilmaamay laguma talinayo in la dilo shimbirta, taasoo ku xiran hababka koritaanka iyo qaangaadhnimada.